डेरीको ८० प्रतिशत व्यापार चौपट, अर्बौंको दुग्धजन्य सामग्री डम्प | Ratopati
कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भएको छ । त्यसमा डेरी क्षेत्र पनि अछुतो छैन । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीमा यो उद्योग सधैँ सञ्चालित रहे पनि ८० प्रतिशत व्यापार चौपट छ । विगत ६ महिनाको अवधिमा मात्र यो क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भइसकेको छ । पुरै ‘चेन अफ भ्यालु’लाई नै प्रभावित पारेको छ ।
तर किसानबाट दुध आए पनि हामीले त्यसलाई बजारमा पठाउन सकेनौं । विगतको तुलनामा अहिले १५–२० प्रतिशतमात्र व्यापार हुन्छ । तैपनि हामीले व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले व्यापार बन्द गर्यौं भने त्यसको सबभन्दा ठूलो असर साना किसानहरुलाई पर्छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले जसोतसो व्यापार सञ्चालन गरेका छौं । नत्र तपाई नै भन्नुस्, ८० प्रतिशत व्यापार चौपट भएको बेला कसले दुःख गरी चलाईरहन्छ ? असोज १ गतेदेखि निषेधाज्ञा हटाइएको छ । हामी सामान्य अवस्थामा आउने प्रयत्न गरिरहेका छौं तर जुन हिसाबले बजार बढ्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले बढ्न सकेको छैन ।
–सामान्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पहिला हामीले चार लाखदेखि साढे सातलाख लिटरसम्म दुध खरिद गरेका थियौं । गतवर्ष त हामीले एक लिटर दुध पनि किसानलाई पोख्न दिएनौं, अर्थात् भएका सबै दुध हामीले उठाएका थियौं । त्यतिबेला पनि बढी भएका दुधलाई हामीले धुलो (एसएनपी) र बटर बनायौं । त्यसका लागि त्यतिबेला सरकारले हामीसँग दुधमा राहत दिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यसले गर्दा हामीले थुप्रै दुध खपत गरेका थियौं । तर सरकारबाट हालसम्म कुनै राहत पाउन सकेनौं । हामीले गतवर्ष जुन धुलो दुध र बटर बनाएका थियौं, त्यो यसपाली चैतदेखि भदौसम्ममा कटाउने (खपत) योजना थियो । दुग्धजन्य पदार्थ खपत हुने समय नै त्यही हो । तर कोरोनाका कारण शुरु भएको बन्दाबन्दीले त्यो स्टकलाई कटाउन (खपत गर्न) सकेनौ, उल्टै त्यसमा थपिदै गइरहेको छ । र, अहिले त्यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसमा हाम्रो करोडौं रुपैयाँको चालु पुँजी फसेको छ । अब कात्तिकदेखि झन् दुधको उत्पादन बढ्छ, त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ र यता स्टक (भण्डार) मा रहेको सामानलाई के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिदै गइरहेको छ ।
–सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय यही हो । कुनै पनि सामानका लागि त्यसको बजार भएन भने चिन्ताको विषय रहन्छ । दुग्धजन्य पदार्थका लागि यो झन् चिन्ताको विषय हो । असोज १ गतेदेखि अलि सहज हुँदै गएको छ तर बजार पुरै खुलेको छैन । स्कूल कलेजहरु अझै बन्द छन्, पार्टी प्यालेस लगायतका थुप्रै ठाउँ अझै बन्द छन् । त्यसले गर्दा सामान्य अवस्था आउन अझै केही समय लाग्छ । चाडपर्व शुरु भएको छ, दशैं तिहार, छठसम्ममा केही खपत गर्ने योजना बनाएका छौं । यदि बीचमा फेरि लकडाउन वा बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो भने धेरै टाट नै पल्टिन्छन् । निजी क्षेत्रमा स्टोर भएर बसेका सामग्रीलाई खपत गराउने दायित्व सरकारको पनि हो । हामीले सरकारलाई के अनुरोध गरेका थियौं भने प्रहरी र सेनामा खपत हुने दुग्धजन्य पदार्थ हाम्रोबाट लिइदियोस् । त्यहाँ विदेशी धुलो दुध प्रयोग गरिरहेको छ । हाम्रोबाट लिइदियो भने धेरै हदसम्म खपत हुन्थ्यो । तर त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अर्को कुरा, विदेशबाट आउने दुग्धजन्य पदार्थलाई पुरै रोक्न सक्यो भने हामीसँग भएका सबै खपत हुनसक्थ्यो । सरकारको तर्फबाट यी दुईटा कार्य भयो भने हामीलाई धेरै हदसम्म सजिलो हुन्थ्यो ।
त्यसपछि हामीले मज्जाले काम गर्यौं । भएका दुधहरु खरिद गरेर हामीले कन्भर्जन गर्यौं । त्यो बेला तपाईले याद गर्नुभएको होला, हामीले मिल्क होलीडे हुन दिएनौं । सबै दुध खरिद गरेर धुलो बनायौं । त्यस लगत्तै कोरोना शुरु भयो । पहिलादेखि स्टोर रहेका सामान होल्ड भयो । चालु पुँजी त्यहाँ फसेर बसेको छ भने त्यस अवस्थामा हामीले के गर्ने ? सबै दुध हामीले खरिद गर्यौं तर त्यसमध्ये ८० प्रतिशत विक्री हुँदैन, त्यो ८० प्रतिशतलाई हामीले कन्भर्जन गर्यौं भने कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ । तैपनि हामीले किसानबाट सक्ने जति दुध खरिद गरिरहेका छौं । विक्री भएका बाहेकलाई हामीले कन्भर्जन गरि राखिरहेका छौं । किसानले हाम्रो पनि समस्या बुझिदिनु पर्यो ।